Qiyaasta farsamada ● Xawaaraha: 0.1 ilaa 100 rpm, dib u laaban karo ● Xawaare sax ah: 0.1 rpm ● Xakamaynta xawaaraha: Koodhka xuubka cw (iftiinka cagaaran) / ccw (iftiinka buluugga ah) / joogsi, xakamaynta cw / ccw iyo xakamaynta xawaaraha 0-5 V / 10 V, 4-20 MA iyo 0-10KHz W condition Xaaladda hawlgalka: Heerkulka 0 illaa 40 ℃, Qoyaan isku dhow <80% weight Miisaanka wadista: 2 ....
MP Taxanaha Micro plunger bamka waa mug yar, sax sare, taxane alaabta nolosha dheer. Badanaa qalabka iyo qalabka codsi u dhigma. Waxay ku wareejin kartaa dareere ka yar 5ml. Isticmaalayaasha ayaa wadi kara mootada jaranjarada si ay u xakameeyaan, ama u doortaan darawal kale. Waxaa jira laba nooc oo wadid ah oo la doorto: 12.5-QD1 Iyadoo aan lahayn rotor-xiran (xawaaraha xawaaraha: 0.75-450rpm) 12.5-QD2 oo leh rotor-xiran (xawaaraha xawaaraha: 90-450rpm) Labadaas nooc waxay leeyihiin isku xirka korantada elektromagnetic, waxay leeyihiin RS485 commu ...
Naqshadeynta loogu talagalay codsiyada daahirnimada sare, daloolka hoose ee aadka u siman ee Huiyu Silicone Tubing wuxuu yareyn karaa halista xiridda walxaha iyo kor u qaadista microscopic inta lagu jiro wareejinta dareeraha xasaasiga ah Falanqaynta gudaha ee dusha gudaha ee Shaybaarka Nadiifinta Silicone marka la barbar dhigo tubbada kale ee silikoonku waxay muujineysaa inay ilaa saddex jeer ka jilicsan tahay. Intaa waxaa sii dheer, jidkan dareeraha fudud wuxuu fududeeyaa nidaamka nadiifinta iyo nadiifinta. Ka faa'iideysiga geeddi-socodka daaweynta-platinum, Huiyu Sanitary Silicone Tu ...
Hordhac iyo astaamaha ugu muhiimsan ee walxaha Viton® fluoroelastomer hose Viton by 100% nadiif ah - waxqabadka sare caag synthetic; Caabbinta kuleylka wanaagsan: -40 ° F ee waara 400 ° F heerkulka, heerkulka isdaba jooga ah ee 600 ° F; Awood u leh u adkaysiga xalka ugu ballaadhan iyo kiimikooyin ka badan caag kasta oo ganacsi ah; U dulqaadashada wanaagsan ee saliidaha kala duwan, shidaalka, saliidaha, iyo inta badan aashitada macdanta; VITON tuubada caaga ah ee fluorine-ka waxay caabiyi kartaa aliphatic iyo arom badan ...
Hordhac iyo astaamaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'Tygon # R-3603 qalabka falanqaynta kiimikada tuubada iska caabbinta ku dhowaad dhammaan inta badan loo isticmaalo sheybaarada kiimikada aan dabiici ahayn; Jilicsan, hufan, oo sahlan in la gaboobo shaqada, cidhiidhiga hawada marka loo eego tubbada caagga ah; Caabbinta heerkulka hoose ee aadka u fiican, ee loogu talagalay isticmaalka -43 ℃ wali waxay ilaalinaysaa dabacsanaanta; Waxaa loo isticmaali karaa sida hawo-qaboojiye, qaboojiyeyaasha, neef-mareenka, iyo tuubbada kale ee qashin-qubka shaybaarka iyo tubbada bamka ee peristaltic. Qeexitaanka Waxyaabaha Aqoonsiga nambarka aqoonsiga (mm) Gidaar t ...
Hordhac iyo astaamaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'PharMed® peristaltic pump bamka tuubada maaddooyinka bayoolojiga ah, baaritaanka unugyada oo leh isticmaalka dheer ee bamka peristaltic, cimri dheer marka loo eego tubbada silikoonka 30 jeer; Waa lagu celin karaa jeermis dil otoclave ah; Iyadoo la raacayo heerarka Mareykanka USP Class VI, FDA iyo heerarka NSF; Isku xirnaanshaheeda heerarka ISO10993; Isku-adkaysiga 60 jeer ka xoog badan tubbada silikoonka. Qeexida Waxyaabaha Aqoonsiga Tirada Aqoonsiga (mm) dhumucda gidaarka (mm) Madaxa bamka habboon M / xirmada Pha ...
Hordhac iyo astaamaha ugu muhiimsan ee tuubada Norprene®Chemical Waxay leedahay iska caabin kiimiko ah oo aad u fiican iyo nolol dheer Teflon derbiga gudaha ee maaddada tuubada, dusha sare ee siman, oo aan lahayn bacrimiyeyaasha, xayeysiinta ka hortagga dareeraha, ma nuugista; Lakabka sare ee walxaha adkaysiga u leh cimriga dheer, ayaa ku habboon asiidhyada, alkalis, aalkolada, ketones iyo keenista dareeraha kale ee daxalka badan. Qeexitaanka Waxyaabaha Tirada tuubada Aqoonsiga (mm) dhumucda gidaarka (mm) Ku habboon pumphead M / Xidhmada Norprene®Kimikada 16 # ...
Hordhac iyo astaamaha ugu muhiimsan Fluran®F-5500-Tuubbo adkaysi u leh daxalka; Adkaysi u leh inta badan asiidhyada, alkalis, shidaalka, dareeraha dareeraha; Isticmaalka muddada-dheer ugu badnaan 204 ℃ bey'adeed; Waxay aad ugu adkaysataa ozone iyo iska caabinta cimilada; dabacsanaan, dabacsanaan aad u fiican, ayaa ku habboon daabulida warbaahinta aadka u nugul leh tubbada bamka peristaltic. Qeexitaanka Waxyaabaha Tilmaamaha Aqoonsiga Tirada Tirada (mm) dhumucda gidaarka (mm) Madaxa bamka habboon M / xirmada Fluran®F-5500-A 16 # 3.1 ...
Maaddooyinka isku-xidhka tubbada wadajirka ah ee loo yaqaan 'Polypropylene' (PP): Iska caabbinta kiimikada ee wanaagsan, heerkulka ku habboon ee khuseeya -17 ～ ～ 135 and, waxaana lagu daaweyn karaa ethylene oxide ama autoclave. Qaabka wadajirka ah ee tuubbada wadajirka ah Qaab toosan "Y", nusqaamiyaha nooca jadwalka isku xidhka tuubbada tubbada toosan Dhexdhexaad Dhexdhexaad ah (inji) 1/16 ″ 1.6 13 # 14 # 1/8 ″ 3.2 16 # 3/16 ″ 4.8 15 # 25 # 1/4 ″ 6.4 17 # 24 # 3/8 ...
Footswitch JK-1A, JK-2K, JK-3A, JK-4A Cagaha taxanaha ayaa loo qaybiyaa habka xakamaynta heerka iyo habka xakamaynta garaaca wadnaha. Waxaa lagu xakamayn karaa marin ama marin si loo xakameeyo wareegga, halkii laga isticmaali lahaa mashiinka peristaltic ama bamka saliingaha gacanta. Waxay sii deyn kartaa gacmaha isticmaalaha si uu u sameeyo cilmi baaris kale.
Buuxinta Biiyaha Iyo Counter Sunk
Anti-adsorption countersunk Madaxa Maaddadu waa bir bir ah, oo ku xidhan marinka tuubada si looga hortago tuubbada mashiinka inay dul sabbayso ama u nuugto darbiga weelka, si dareeraha gebi ahaanba loo nuugo, iyadoo la hubinayo xasiloonida iyo saxnaanta gudbinta . Waxay ku habboon tahay tuubbooyinka bamka ee kala duwan oo waa la habeyn karaa Cirbadda birta ah ee birta ahaanta loo buuxiyo Waxaa badanaa loo isticmaalaa barta tuubada ee buuxinta tirada iyo gudbinta xasilloon si looga hortago in la buufiyo iyo ...
Module Xakamaynta Dibadda
Habka bamka ku habboon 5 habka xakamaynta hore WT600F-1A BT100L-1A BT100J-1A BT100F-1A BT300J-1A BT300F-1A BT600-2J WT600J-2A 0-5V analog signal 0-10V analog signal 4-20mA analog signal 0-20hz Isgaarsiinta RS485